Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Tsy nasian’ny BAD resaka ny sakafo
Inty sy Nday : Tsy nasian’ny BAD resaka ny sakafo
Isan’ireo rafitra iraisampirenena miara-miasa amin’i Madagasaikara ny Banky Afrikana ho amin’ny Fampandrosoana (BAD), izay nampahafantatra ny alakamisy teo ny akon’ny jery todika nataony momba ny fiainana ara-toekarenan’i Madagasikara nandritra ny enim-bolana voalohan’ity taona 2021 ity. Tao anatin’izany no nampilendalendain-dry zareo fa “mila vola hatramin’ny 820 tapitrisa dolara mba hanarenana ny tontolo ara-toekarena i Madagasikara amin’ity enim-bolana faharoa ity”. Toa te hiteny ny BAD fa “afaka manampy anareo raha manaraka ny fepetra heverinay fa tokony harahinareo ianareo”.
Ireo fepetra ireo moa dia saika efa ampiharin’ny fitondrana avokoa, toy ny fanaraha-maso ny famoaham-bolam-panjakana amin’ny fanafarana fitaovana sy kojakoja ary akora sy ny fanamaivanana ny tontolon’ny fandraharaharana. Eo koa ny fanentanana ny fampidiram-bola ao amin’ny kitapom-panjakana ary mifanindran-dalana amin’izany ny tsy fahombiazana loatra amin’izay tetik’asa andanian’ny fanjakana vola.
Dia notsindrian-dry zareo ny fanamafisana ny fanavaozana sy fanatsarana ny fampanjakana ny mangarahara sy ny fiezahana mba hisy vokany tsara kokoa ny fandaniam-bolam-panjakana.
Fa ny fepetra hafa dia ny fampitomboana ny fampiasam-bolan’ireo sehatra tsy miankina, ny fananganana fotodrafitrasa, ny famokarana herin’aratra sy ny fanatsarana ny fitaterana. Ny sehatry ny fampivelarana ny fanaovan-taozavatra na ny indostria sy ny haitao avo lenta amin’ny fifandraisana (TIC) ary ny fizahan-tany dia isan’ny notsindrian’ny BAD.
Rehefa jerena ireo voalaza ireo dia saika ny efa ifotoran’ny fitondrana ankehitriny, saingy tsy mbola ampy hery enti-manosika azy ny fanjakana ka zary misisika mitady ny sehatra mba hangejany ny tontolom-pihariana eto ny mpanam-bola tsy miankina, izay ny vahiny no tena maro aminy, raha tsy hiresaka afa-tsy ny famokarana herin’aratra sy ny haitao avo lentan’ny fifandraisana (TIC), ny fanaovan-taozavana amin’ny indostria… isika.
Tsy voaresaka mihitsy, mety niniana tsy nasian-teny, ny famokarana sakafo manomboka amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fambolena, na ny fanitarana ny tany volena io, ny fanatsarana ny masomboly, ny fanamaivanana amin’ny vidin-jezika, ny fametrahana ny fotodrafitrasa hahafahana manondraka ny velaran-tany volena. Tsy nasiany resaka koa ny tontolon’ny fiompiana izay isan’ny miantoka ny sakafo. Na ireo ihany aza dia efa goavana ary tafiditra amin’ny fitsinjovana ny fanamaivanana ny fahasahiranan’ny vahoaka amin’ny andavandrony. Hiantoka ny fihatsaran’ny fidiram-bolan’ny tantsaha koa izany izay hanalefaka ny vaikan’ny fidangan’ny vidim-piainana.
Famoronana asa no tanjon’ny BAD, toy ny mpampanjana-bola hafa, saingy ampahany ihany amin’io famoronana asa io no ho voavahan’ireo fepetra napetrany ireo fa ny famokarana sakafo dia sady afaka miantoka famoronana asa betsaka no afaka miantoka ny sakafo ary azo ianteherana amin’ny fampiroboroboana ny toekarena na ny eto an-toerana na ny haondrana raha ilaina.